Ọkachamara Semalt Na-enye Ụzọ Mgbochi Iji Tinye Ntuziaka Spam na Bot Traffic
Ị nwere ike ịbanye n'ime nchịkọta Google Analytics gị ma hụ narodar.com, njide, na enweghị ike ịkọ ndị ọzọ na akụkọ ntinye aka gị. Ma ọ bụ, n'akụkụ aka nke ọzọ, ị hụwo nnukwu anụ na-arụ ọrụ na-arụkọ ọrụ.
Oliver King, onye na - ahụ maka ndị na - ahụ maka ọrụ nke
E nwere ụdị abụọ nke spam nke na-efesa na nchịkọta nchịkọta gị.
Mbụ, ndị bọọlụ na-adịghị aga na saịtị gị - logos fotografia digital en. M na-ezo aka na ha dị ka "ọkpụkpụ mmụọ". Akpụkpọ ụkwụ ndị a bụ spam na-akwadoghị na ihe na-enweghị ike ịchọta site na spam email, nkwupụta spam, na efere n'okpuru windo ụgbọala gị.
Nke abuo, bọọlụ ndị na-atagharị na saịtị gị. M na-ekwu na ha dịka "zombie bots", nke na-emekarị nyocha nyocha n'ihi ntinye ha dị iche iche.
Ònye Na-egbu Ya na Ihe Mere O Ji Na-eme?
Ọkpụkpụ mmụọ bụ ihe na-eme ihe n'ụzọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-enweghị ike ịchọta n'ihu ìgwè mmadụ.
Bọm Zombie adịghị mma ma ọ bụ na-agụnye bots. Bots mgbe enwere obi abụọ ma dị otu akụkụ nke weebụ..
Enweghị azịza zuru ezu maka bọọlụ niile (na enweghị enyemaka Google), mana enwere ihe abụọ ị nwere ike ime iji dozie nchịkọta gị.
Enwere ọtụtụ ntụziaka dị oke egwu banyere nsogbu a. Iji Ntuziaka Ntuziaka n'okpuru Ngwongwo abụghị ihe a na-edebere na spam na-eme ka eziokwu ahụ doo anya:
Ọ bụghị nkwekọrịta niile.
Ọ bụghị nanị kpọmkwem.
Ọ nwere ike ịmegharị nleta na nleta na-aga.
Ọ gaghị enyere gị aka ịlele akara ụgha na ozi nwere ike igosi ya.
E nwere ọtụtụ mpaghara (na-atụle ndị a pụrụ ịtụkwasị obi) na-atụ aro mgbanwe ndị ọkachamara na-echekwa ihe nkesa, dịka ọmụmaatụ, .htaccess gbanwere. Nke ahụ bụkwa otu echiche dị egwu.
N'ikpeazụ, igbe nchịkọta Google Analytics na "Bots Bọtị na Aghụghọ Mara Ọhịa" anaghị emegide esemokwu na zombie.
Ndị na-ekwu okwu banyere mmụọ na-apụta na nyocha nke na-emetụbeghị. Mkpuru osisi ahụ adịghị ajụ maka akwụkwọ ọ bụla na usoro gị. Ọ na-ekesa ozi ọ bụla ọ dị mkpa ka ọ zitere n'ụzọ doro anya na nchịkọta Google Analytics site na ịkwụsị koodu nchọpụta na koodu UA.
Zombie bọtịnụ na-enye gị ohere inye ihe ọzọ ebe ọ bụ na ha na-arahụ ma na-abanye na saịtị gị. N'elu ohere na ị ga-ele anya na nkwekọrịta ihe nkesa, nke mmemme a site na InMotion Hostingsolid. Ikwenye ha na usoro gị abụghị naanị na-agbakwụnye nchịkọta nhicha na nchịkọta gị, ọ pụkwara ibelata nchịkọta na ihe nkesa gị.
Ruo mgbe ndị mọnk na-eme ndokwa ọzọ, anyị na-ejide ọnyà na-emepụta ọwa nke na-ewepụ ọtụtụ n'ime mkpịsị ụkwụ ahụ na-edeghị ihe ndị aghụghọ.